Barnaamijka Ma,Ogtahay Qalinkii C.salaam axmed maxamuud-dj |
somalipublic / December 5, 2015
Kulanti Wacan Akhristayaal Kusooo Dhawaada Bar-Mao,Ogtahay Oo Idiin Soo Diyaariyey C.salaam Axmed Maxamuud-dj
1.Ma ogtahay akhristow in gorayadu isheedu ay ka weyn tahay maskaxdeeda.
2.Ma ogtahay akhristow in yaanyuurta ama mukulaasha ay labadeeda dhagod mid waliba ku leedahay 32 murqood.
3.Ma ogtahay akhristow in gerigu uu ku nadiifiyo carabkiisa dhagihiisa.
4.Ma ogtahay akhristow in xarafka looogu isticmaal badan yahay xarfaha ingiriiska uu yahay xarafka”E”
5.Ma ogtahay akhristow in in jumlada ingiriiska ee ah “the quick brown fox jumps over the lazy dog” ee ka kooban tahay dhamaan xarfaha ingiriiska.
6.Ma ogtahay akhristow in bilaha ku bilowdo maalin axad ah in ay 13 bishaas ay tahay maalinimo jimca ah.
7.Ma ogtahay akhristow in cabitaanka coca cola in asalkiisa ay ku jiri jirtey maadada cocaineta .
8.Ma ogtahay akhristow in gobolka jubada dhexe uu ka kooban yahay 4 degmo oo kala ah saakow,bu aale ,jilib, iyo dajuuma.
9.Ma ogtahay akhristow in isticmaalka tufaaxa uu hurdada kaa qaado inka badan coffeega.
10.Ma ogtahay akhristow in qalabka loo isticmaalo cabitaanka biyaha ee loo yaqaano “STRAW” la ogaadey sanadkii 1886.
11.Ma ogtahay akhristow in gobolka Hawaii ee dalka mareykanka uu yahay gobolka kaliya ee beero coffeega.
12.Ma ogtahay akhristow in dalka Iceland uu yahay dalka loogu isticmaal badan yahay cabitaanka coca cola marka loo eego dunida inteeda kale.
13.Ma ogtahay akhristow in coffeega uu yahay midka loogu ganacsi badan yahay adduunka marka laga reebo petrolka.
14.Ma ogtahay akhristow in cuntada aadan dhadhamin Karin ilaa ay taabato candhuuftaada.
15.Ma ogtahay akhristow in 11% dadka dunida ku nool ay yihiin gureyaal.
16.Ma ogtahay akhristow in lafaha ugu yar jirka bibi aadmaka ay ku jiraan dhegaha.
17.Ma ogtahay akhristow in lugta bibi aadmka ay ku jirto 26 lafood.
18.Ma ogtahay akhristow in bill gates uu bilaabey in uu prograamiyo computerada markii uu jirey 13 sano.
19.Ma ogtahay akhristow in Albert Einstein uusan aqooni jirin sida loo wado baabuurta.
20.Ma ogtahay akhristow in maskaxa bini aadamka ay ka kooban tahay 78%biyo.
21.Ma ogtahay akhristow in dalka Switzerland uu yahay dalka loogu cunid badan yahay shukulaatada mase ogtahay in qofkii uu cuno 10 kilo sanadkii.
22.Ma ogtahay akhristow in dalka Australia markii hore loo aqoon jirey”the new Holland”.
23.Ma ogtahay akhristow in wadada ugu dheer dunida ay tahay yonge street ee ku taalo magaalada Toronto ee dalka Canada dhirirkeeduna yahay 1,896 km(1,1178 miles)
24.Ma ogtahay akhristow in shirkada nokia loogu magic daray meel ku taal koonfurta dalka findland.
25.Ma ogathay akhristow in dalka Jamaica uu maro 120 webi.
26.Ma ogtahay akhristow in dalka sacuudi carabiya uusan laheyn webi.
27.Ma ogtahay akhristow in kalluunka loo yaqaano dolphins uu kaliya ku hurdo hal il.
28.Ma ogtahay akhristow in cirbixiyeenadu aysan si fiican ugu oon Karin hawada sare sababtoo ah malahan gravity sidaa darteed ilinta kuma dareeri karto dhabanadooda.
29.Ma ogathay akhristow in eyga uu maqlo cod aysan bini aadamku maqli Karin.
30.Ma ogtahay akhristow in raha ama rakaha uusan wax liqi Karin indhihiisa oo furan.
Ma Ogtahay!!! In magaalo madaxda dalka Malaysia ee Kuala Lumpur, ay ku yaalaan hoteeladda addunka ugu raqiisan ee lyxhotel ka loo yaqaano.
Mase Ogtahay in Magaaladda Newyork na ay ku yaalaan kuwa aduunka ugu qaalisan. Maxaa yeelay qofkii seexanaya mid kamid ah hoteeladaas ee Kuala Lumpur waxa uu bixinayaa lacag lagu qiyaasay 60-70$ dollarka Mareykanka ah,halka aad hoteelada kuyaalo Newyork aad ka bixineysid 120-150$dolllar halkii habeen oo keliya…
Mase Ogtahayse in jasiiradda layiraahdo Honkong ay bari hore aheyd wadanka ama jasiiradda aduunka ugu hoteelo qaalisan, hase ahaatee markii ay noqotay qeyb kamid ah dalka Shiinaha sanadii 30/7/1997da ayey aad ugu hoos dhacday qiimaheedii, waayo dalka Shiinaha ma ahan wadan sidaas aad ugu xiiseeya dhinaca hoteeladda iyo dalxiiska. Inkastoo jasiiradasi wali ay kamid tahay wadamada ay hoteeladeedu aadka qaaliga u yihiin, hadana waxa ay ku jirtaa kaalinta 17aad, marka laga hadlaayo hoteelada iyo dhinaca dalxiiska adduunka
Ma Ogtahay in sanadku markuu ahaa 1992dii oo aheyd waqti aad kulul, xaaladdii dalka hooyo ee soomaaliya ay aad ku kacsaneyd, dadweynihii soomaaliyeed ee nabad jeclaa aya kasoo carareen dhulkoodii hooyo, iyaga oo nabadgayo u raadsanaya wadamadda jaarka la’ah (Soomaaliya).
Sheeko yaab leh oo aniga iga fajicisay oo maxay tahay?
Waxaa jirtay inaanu nin aanu is naqaanay oo dusha ika niqiinay, laakiin aanan saaxiibo dhab ah ahayn, maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaan arkay ninkii oo gaari yar wata xaga danbena ay u saaran yihiin gabadh soomaaliyeed iyo nin ajnabi ah.
run ahaantii Labadaas ruux ee gaadhiga xagiisa danbe saarnaa waxay samaynayeen wax runtii diinteena islaamka aad ugu fool xun oo ah inay isku dhex jaqayeen gaadhiga xagiisa danbe ama bishmaha iska nuugayeen qofba siduu u yaqaan haw qaatee. isla markaas anigu waxaan watay gaadhi, cabaar markaan daba socday, in yar ka dib ninkii aanu is naqaanay waxaan ku arkay xaafadayda meel u dhow.
Waan weydiiyey labadii qof uu siday waxay ahaayeen, wuxuuna igu yiri waxay gabadhu ahayd gabadh aanu qaraabo nahay ninkuna wuxuu ahaa saaxiibkeed. Waxaan weydiiyey ma waxaad u jeedaa waa ninkeedii, wuxuu yiri maye waa saaxiibkeed, waxaan weydiiyey xageed geysay iminka, wuxuu yiri waanu soo cashaynay wayna is raaceen.
Ka dib ninkii waan waaniyey waxaana u sheegay in! aysan waxaani diinteena iyo dhaqankeena midna ku banaanayn ee haddii aad gabadha qaraabo tihiin maad sida u dhantid. Run ahaantii markii hore ninkii wuu iga aqbalay waanadaydii, balse markii danbe wuu is bedelay oo yiri, intuu si cadho leh u hadlay, gabadha aniga maxaa iga galay dookheedu ninkuu rabo buu siin karaa. Ka dibna waxaan u heegay maadaama oo gabdhihii soomaaliyeed qurbaha ku wada baa,been hadana inayan dhaqan inoo ahayn ummaddeena soomaaliyeed gabdhana wada eedayn maayo waayo waxaa ku jira in dhowrsoon oo ilaahay u naxariistay.
Hadaba waxaan uga jeeda sheekadayda Ma Ogtihiin ninkaas sheekadu na dhex martay inuusan ahayn nin yar ee uu ahaa” 30 jir”, markaa run ahaantii fadlan waxaan talo iyo tusaale uga dhigayaa figradayda dhamaan waalidiinta iyo waxgaradku inay ka fekeraan mutaqbalka hablahooda iyo kan diintoodaba.
December 5, 2015 in Wararka Maanta.
Wiil Muslim ah oo caan ku noqday muddo kooban kadib markii la xiray
← Wasiirka Maaliyadda oo ka warbixiyay shirar uu uga qeyb galay Sacuudiga iyo Kuwait (Sawirro)
Sacuudiga oo ku dhawaaqay Isbaheysi ka kooban 34 dal Islaam ah oo la dagaalama Argagixisada →